Ungaphoswa ziiNtetho zeFlash Day yeNkulumbuso yeAmazon (ngoJulayi 10) | Iindaba zeGajethi
Ungaphoswa ziintengiso zeAmazon Prime Day (nge-10 kaJulayi)
Namhlanje ngumhla we-10 kwaye oko kubizwa ngokuba yi-Prime Day kuyaqala, izibonelelo eziphezulu zeAmazon ziya kuhlala iiyure ezingama-48, ziya kuqala namhlanje nge-10 kaJulayi kwaye ziphele ngoJulayi 11. Nangona kunjalo, unikezelo olusisigxina aluzi lodwa, nanjalo Siza kuba neklasikhi ye-classic "flash" apho iAmazon Isinika isixa esihle seemveliso ezinomdla kwiiyure nje ezimbalwa.
Namhlanje sifuna ukukubonisa eyona flash inika umdla ngolu suku lokuqala lwe-Prime Day kwiAmazon, kwaye ndikukhumbuze, phakathi kwezinye izinto, ukuba ungasonwabela isaphulelo se- $ 5 ngokubukela nasiphi na isahluko kuthotho lweVidiyo yeAmazon.
Ke masikhe sithathe ukhenketho oluncinci lwezona zinto zinomdla zokwenza le Day Prime yeAmazon Baza kuqala ngexesha lokupapashwa kwale posi (18:00 pm) kwaye baya kuhlala kuphela kude kube yi-23: 45 pm kwangolo suku lunye, nge-10 kaJulayi., ke ukuba unomdla kwimveliso, sukuyishiya kwakhona. Khumbula ukuba ukuba ufuna ukuthenga imveliso kuya kufuneka ucofe umfanekiso.
1 Abo banesona saphulelo
2 Ezinye izibonelelo
Abo banesona saphulelo
Le Dragon Touch ithebhulethi ye-Android inayo isaphulelo sama-67% Oko kuthetha ukuba uyehla ukusuka kwi-199 ukuya kwi-X 66,99 € Ixabisa ngoku, esona saphulelo sinomdla esisifumana kwezi zinto zikhutshelweyo. Ikhuselwe ngokupheleleyo ukuze abantwana bakho bangaze bayiphule.
Le tshaja ikhawulezayo yehla nayo iyehla ukusuka kwi- € 21,99 ukuya kwi- € 11,99 nje kwaye kunokuba yinto enomdla kakhulu ukuba nesixhobo sakho silungele kwaye sikhawuleze kakhulu.
Kwaye ekugqibeleni oku links engenazingcingo Inomdla kakhulu, ibonelela nge-AC AC yekhaya liphela ngamandla amakhulu kunye neempawu zayo yi- € 119,99 kuphela, esiyi-29% isaphulelo. Inee-USBs ezininzi kwaye ngokuqinisekileyo ibhendi ye5GHz ilungele ifayibha yokukhanya.
Ibhetri yangaphandle ye-Aukey ene-USB 2.0 kunye ne-16.000 mAh emnyama emnyama nge- € 15,99
Isithethi esikhulu seBluetooth ngeSubwoofer nge- € 22,99 kuphela
Umgangatho ophezulu weBluedio ii-headphone ezingenazingcingo nge- € 21,99 nje
Ezi zezinye zezona zinto zinika umdla esizifumeleyo kwi-Prime Day ye-flash unikeza, nangona kunjalo, Ungathandabuzi ukuthatha uhambo kuzo zonke izibonelelo ezilungiselelwe iAmazon kuwe LONTO ukuba siphulukene nento enokukuthakazelisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Ungaphoswa ziintengiso zeAmazon Prime Day (nge-10 kaJulayi)
Nge-21 kaJulayi, iNintendo iya kuphehlelela usetyenziso lweNintendo Shintsha kwi-Intanethi